‘स्पेन वा कम्बोडियामा जस्तै नेपालमा पनि राजतन्त्र फर्कन्छ’
नन्दकिशोर पन्त, संयोजक–स्वतन्त्र नागरिक आवाज
तपाइको यो जुन ‘स्वतन्त्र नागरिक आवाज’ नामक संस्थाले विद्यमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहेको छ ?
अहिलेको राजनीतिक अवस्था आउँछ भन्नेमा हामी हिजो नै प्रष्ट थियौं । त्यसकारण हामीलाई कुनै नौलो लागेको छैन । किनभने दलहरुको आचरण शुद्ध छैन । दलहरु नैतिकवान छैनन् । आफनो धरातलमा नेताहरु हुनुहुन्न । दलिएकरण छ । त्यसले गर्दा यो अवस्था आउने नै थियो । आयो ।
जुन–जुन देशबाट राजाहरु लखेटिए ती–ती देशहरुमा यस्तै अवस्था आउँछ । यो अझ बढी जान्छ । उहाँहरु अहिले बोलीमा मात्रै लडाइ गरिरहनु भएको छ । अब भौतिक रुपमा पनि सुरु हुन्छ । त्योपनि एउटै दलबाट । जस्तो कि नेकपा एमालेमा माधब नेपाल पक्ष र ओली पक्षकाबीच सबैभन्दा बढी झगडा छ । त्यसपछी त्यही पार्टीमा अरु अनेक गुट छन् । काँग्रेसमा पनि त्यस्तै छ । देउवा र रामचन्द्र एक अर्कालाई देखि नै सहँदैनन् । त्यहाँपनि गगन गुट, सिटौला गुट, अर्जुन नरसिंह गुट । मधेशी जनअधिकारमा त्यस्तै छ । उनीहरुको त कुरै नगरौ । त्यसकारण यो व्यवस्था नेपाली समाज विभक्क्त गर्न आएको ब्रान्डेड कुरा हो । यो कुनै खुद्रा कुरा होइन । यो पश्चिमा देशहरुले घुसाएकै हो । चाइनिजहरुलाई एक्ल्याउन, घेराबन्दी गर्न आएको हो । हामी मानवशास्त्रीहरु, समाजशास्त्रीहरुलाई पहिल्यै थाहा थियो यी कुरा ।
तपाइको स्वतन्त्र नागरिक आवाजले चाँही के गरिरहेको छ त अहिले ?
हामीले सचेत र सक्रिया जनताहरुको समुह बनाइरहेका छौ । अब यो बज्रपात त आइहाल्छ । जनता तयारी पार्नुपर्यो नी । यो राजनीतिक रुपमा ठगी गर्ने ठगहरुको संङख्या धेरै छैन । बढीमा एक डेढ लाख होला । ठुकुटीमा रजाइ गर्नेहरु थोरै छन् । अहिले खान पाउने र नपाउनेहरुको झगडा हो यो । जुन नेपाली जनतालाई थाहा छैन । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक आवाजले ०४६ साल अघि नजाम, ०४६ पछाडीको यो ३२ बर्षको हिसाव किताब लेउ, तिमिले विदेशबाट कति ल्यायौं, राजस्व कति उठायौं, तलब भक्तामा कति खर्च भयो. । विकास कति भयो, बाँकी बस्यो कि बसेन अथवा कति घाटा पर्यो प्रष्टसँग ३ करोड जनतासँग हिसाव देउ । हामी अरु केही मागेका छैनौ । हिसाव देउ न तिमिले चुनाव लड्दा कति लडयौ, एकचोटी चुनाव लड्दा तिमिले खर्च कति गर्यौ, त्यो खर्च यो देशका लागि आवश्यक छ कि छैन ? नेपाली जनताको स्तर कहाँ छ ? कतिन्जेलसम्म झुक्याउछौ नेपाली जनतालाई ? भनेर हामीले स्वतन्त्र आवाज उठाएका छौ । यो स्वतन्त्र मान्छेहरुको आवाज हो । हामीले मेची महाकाली नै यो खालको आवाज उठाएका छौ । मास्नै नपर्ने यो देशको हिन्दु किन मास्न पर्या? हिन्दु भोटर, हिन्दुका सासंद कसरी गैरहिन्दु भएको ? अचम्म त यो पो छ त । ९० प्रतिशत हामी हिन्दु नै छौ यहाँ । त्यसकारणले हामी यो नागरिक आवाज नागरिक समाज हो । यसले जनतामाथी थोपरिएका बिसंगती, विकृतिहरु, भष्टाचार, बलत्कार लगायत हरेक विसंगती विरुद्ध दरो रुपमा आवाज उठाउँछ ।
तपाइहरुको राजतन्त्र फर्काउने खालको अभियान जस्तो छ । मरेको राजतन्त्र अव फेरी व्युउँतेला त ? के आधार छ भन्नुस् त ?
फर्कनु नपर्ने कारण चाँही के छ त ? अहिले त जन–जनबाट राजतन्त्र नै ठीक रहेछ भनेर आवाज उठिरहेको छ । अहिलेकै राजनीतिक विकृति, बिसंगती, भष्टाचार र जनताका नाममा राजनीति गरेर जनतालाई नै मरुन्जेल ठग्ने राजनीति नै राजतन्त्र फर्कने आधार हो । अहिले जनतालाई ठग्ने बाहेक के भएको छ भन्नुस् त । स्पपेनमा २२ बर्षपछि राजतन्त्र फर्कियो, इथियोपियामा फर्कियो । धेरै देशमा फर्किए । नेपालमा त अन्त भन्दा छिटै राजतन्त्र फर्कन्छ, हेर्दै जानुहोला । धन्यवाद ।
प्रस्तुती : टिका तिमल्सिना
प्रकासित मिति २०७७–१२–१२